कसरी उत्तम ED गोली चयन गर्ने चेकअप - औषधि जानकारी | सेप्टेम्बर 2021
समाचार कल्याण चेकआउट औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कल्याण मनोरञ्जन घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि बनाम मित्र कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार भारी खेल कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि जानकारी >> कसरी उत्तम ED गोली प्रयोग गर्ने
कसरी उत्तम ED गोली प्रयोग गर्ने
इरेक्टाइल डिसफंक्शन (ED) एक यस्तो अवस्था हो जहाँ पुरुष यौन उत्थानको लागि पर्याप्त फर्म रहेको इरेक्शन प्राप्त गर्न र मद्दत गर्न असमर्थ छन्। इरेक्टाइल डिसफंक्शनले धेरैलाई असर गर्दछ Million० करोड संयुक्त राज्य अमेरिका मा पुरुष र अक्सर दिमाग, हार्मोन, मांसपेशिहरु, रक्त वाहिकाहरु, र स्नायुहरु लाई प्रभावित कि मनोवैज्ञानिक र शारीरिक मुद्दाहरु को एक संयोजन को कारणले हुन्छ।
तनाव, चिन्ता, उदासीनता, र कम आत्मसम्मान ईडीको केहि सामान्य मनोवैज्ञानिक कारणहरू हुन्। इरेक्टाइल डिसफंक्शनको अनुभव शारीरिक र भावनात्मक दुबैसँग व्यवहार गर्न गाह्रो हुन सक्छ, तर त्यहाँ बजारमा थुप्रै औषधीहरू छन् जुन सर्तको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ। आउनुहोस् हामी कसरी एक उत्तम ED गोली प्रयोग गर्ने छनौटमा हेरौं।
ED को लागी सबैभन्दा प्रभावकारी गोली के हो?
त्यहाँ एउटै पर्चेको औषधि छैन जो ईडीको उपचारको लागि उत्तम हो। त्यहाँ धेरै औषधिहरू छन् जसले इरेक्टाइल प्रकार्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। सबैभन्दा लोकप्रिय इरेक्टाइल डिसफंक्शन पिलहरू भियाग्रा, लेविट्रा, सियालिस र स्टेन्ड्रा हुन्। यी औषधीहरू फास्फोडीस्टेरेस -5 (PDE5) अवरोधकर्ताहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएका छन्।
इरेक्टाइल डिसफंक्शन औषधीहरूले नाइट्रिक अक्साइडको स्तर बढाउँदै इरेक्टाइल समारोह सुधार्न सहयोग पुर्‍याउँछ, रसायनले रगत वाहिनाहरूमा स्नायु मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ। यसले फलस्वरूप लि to्गमा रगत प्रवाह बृद्धि गर्दछ, जसले पुरुषलाई लि get्गको लागि पर्याप्त फर्म रहेको इरेक्शन प्राप्त गर्न र कायम राख्न अनुमति दिन्छ। यदि सही तरिकाले प्रयोग गरियो भने, स्तम्भित डिसफंक्शन ड्रग्स प्रयोग गर्न सुरक्षित छ र पुरुषहरूलाई उनीहरूको यौन जीवनमा बढी सन्तुष्ट महसुस गर्न मद्दत गर्न धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ।
हामी यी औषधीहरू कती प्रभावकारी छन् भन्ने बारेमा गहिरो दृष्टिकोण हेरौं।
भियाग्रा जेनेरिक औषधि को ब्रान्ड नाम हो सिल्डेनाफिल साइटरेट । यो संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय औषधी हो र यसको उपस्थितिको कारण सानो नीलो गोली पनि उपनाम दिइयो। भियाग्रा अधिकांश पुरुषहरूको लागि एक सुरक्षित र प्रभावकारी औषधी हो भनेर सोच्दछ। को एक अध्ययन अनुसार यूरोलोजीको जर्नल , Ia%% पुरुषहरू जसले भियाग्रा लामो अवधि (१- 1-3 वर्ष) प्रयोग गरिरहेका थिए उनीहरूसँग यौन गतिविधिमा संलग्न हुने सुधारको क्षमता थियो। असंख्य अन्य अध्ययन देखाउनुहोस् कि भियाग्रामा उपचार प्रतिक्रिया फरक हुन सक्छ, भियाग्रा सामान्यतया राम्रोसँग सहन गरिन्छ र इरेक्टाइल डिसफंक्शन सुधार गर्दछ। एक--वर्ष, खुला लेबल अध्ययन भियग्रा को उपयोग प्रतिकूल घटनाहरु को कम घटनाहरु मा देखा पर्‍यो र धेरै बिरामीहरु औषधीले उनीहरुको ED लाई कसरी व्यवहार गर्छन् भन्नेमा खुशी हुन्छन्।
Levitra भनिने जेनेरिक औषधि को ब्रान्ड नाम हो vardenafil । यस अनुसार नपुंसक अनुसन्धानको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल , Levitra खुराक, मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, र २० मिलीग्राम सबै भयो प्रमाणित प्लेसबो भन्दा बढी प्रभावी हुन।भार्डनफिल प्राप्त गर्ने men।% पुरुषले रिपोर्टिस गरे कि प्लेसबो समूहमा २ allocated% पुरुषहरू छुट्याइएको पुरुषको तुलनामा उपचारले उनीहरूको इरेक्शन सुधार गरेको छ। एउटा अध्ययनमा जहाँ 74 437474 बिरामीहरूको मूल्यांकन गरिएको थियो र २ 2660० जनाले वेर्डेनाफिल पाए, 50०..4% ले रिपोर्ट गर्यो विपरित असरहरु ।
सियालिस जेनेरिक औषधि को ब्रान्ड नाम हो tadalafil । खाद्य र औषधि प्रशासन अनुसार ( एफडीए ), ED को उपचारमा Cialis को प्रभावकारिता र सुरक्षालाई २२ क्लिनिकल परीक्षणहरूमा मूल्या 24्कन गरिएको छ, २ 24 हप्ता सम्म उपचारको लागि 000००० भन्दा बढी बिरामीहरू सम्मिलित छन्। प्रति दिन एक पटक भन्दा बढि आवश्यक भएमा, सियालिस mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, र २० मिलीग्राम इरेक्टाइल प्रकार्य उपचारको लागि प्रभावकारी देखाइएको थियो। क्लिनिकल फार्माकोलोजी परीक्षणहरूमा, पीठ र मांसपेशी दुख्ने Cialis को सबैभन्दा सामान्य रिपोर्ट गरिएको साइड इफेक्टहरू थिए। साइड इफेक्ट सामान्यतया १२ देखि २ hours घण्टा पछि dosing पछि देखा पर्दछ र सामान्यतया hours 48 घण्टा भित्र समाधान हुन्छ।
इन्फ्लुएन्जा ए वा बी धेरै गम्भीर छ
Sendra एक ब्रान्ड नाम औषधि हो; यसको रासायनिक नाम एवानाफिल हो। बजारमा वर्तमानमा Sendra को कुनै जेनेरिक संस्करण उपलब्ध छैन। अन्य ईडी पिल्सको तुलनामा, Sendra सँग कार्यको द्रुत सुरूवात छ। यसको द्रुत सुरूवातको कारण, सेन्डेरा यौन गतिविधिको समयको साथ अधिक लचिलोपना चाहने बिरामीहरूका लागि अन्य ईडी औषधिहरू भन्दा मनपर्न सक्छ। केहि अध्ययन सुझाव दिनुहोस् कि स्टेन्ड्रा अन्य PDE5 अवरोधकर्ताहरू जत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्छ, जस्तै भियाग्रा र लेविट्रा, कम प्रतिकूल प्रभावहरू र ड्रग अन्तर्क्रियाहरू हुँदा।
भियाग्रा ( सिल्डेनाफिल साइटरेट ) Levitra ( vardenafil hcl ) सियालिस ( tadalafil ) Sendra (avanafil)
यो कसरी लिने २ to देखि १०० मिलीग्राम यौन गतिविधि अघि minutes० मिनेट देखि hours घण्टा पहिले आवश्यक पर्ने गरी लिईयो। प्रति दिन अधिकतम १ खुराक। To देखि २० मिलीग्राम यौन गतिविधि भन्दा करीव minutes० मिनेट पहिले आवश्यक पर्ने रूपमा लिईयो। प्रति दिन अधिकतम १ खुराक। To देखि २० मिलीग्राम यौन गतिविधि पहिले आवश्यक रूपमा लिईयो। प्रति दिन अधिकतम १ खुराक। To० देखि २०० मिलीग्राम लिईएको थियो यौन गतिविधि अघि १ early मिनेट जति चाँडो। प्रति दिन अधिकतम १ खुराक।
यो कती चाँडो काम गर्दछ लिँदा 30०- minutes० मिनेट काम गर्न सुरू गर्दछ।
२- hours घण्टा बीचमा रहन्छ, वा लामो खुराकमा निर्भर गर्दछ। करीव 30० मिनेटमा काम गर्न सुरू गर्दछ
खुराकमा निर्भर गर्दै L घण्टा सम्म रहन्छ। Minutes० मिनेट देखि दुई घण्टा मा काम सुरू गर्दछ।
Hours 36 घण्टा सम्म रहन सक्छ। लिँदा १-30- minutes० मिनेटमा काम गर्न सुरू गर्दछ।
Hours घण्टा सम्म रहन्छ।
प्रभावकारिता भियाग्राको दीर्घकालीन अध्ययनमा many%% जति मानिससँग इरेक्शन प्राप्त गर्ने सुधारको क्षमता छ। एउटा अध्ययनमा जहाँ 74 437474 बिरामीहरूलाई मूल्या were्कन गरिएको थियो र २ v60० जनाले वेर्डेनाफिल पाए,% reported% ले रिपोर्ट गरे कि यसले उनीहरूको उत्थान सुधारिएको छ। एफडीएका अनुसार, सियालिस mg मिलीग्राम, १० मिलीग्राम, र २० मिलीग्राम इरेक्टाइल समारोह सुधार गर्न सांख्यिकीय रूपमा महत्त्वपूर्ण साबित भयो। स्टेन्ड्रासँग अन्य ईडी पिल्ससँग तुलनात्मक प्रभावकारिता छ र कम प्रतिकूल प्रभावहरू निम्त्याउन सक्छ।
साइड इफेक्ट फ्लशिंग, नाकको भीड, र टाउको दुखाइ। भरिपूर्ण / नाकबाट बग्ने नाक, चक्कर, र फ्लशिंग। टाउको दुख्ने, पेट दुखाइ, र पीठ दुख्ने। फ्लशिंग, पछाडि दुखाइ, र टाउको दुखाइ
कुपन भियाग्रामा पैसा बचत गर्नुहोस् Levitra मा पैसा बचत गर्नुहोस् सियालिसमा पैसा बचत गर्नुहोस् Sendra मा पैसा बचत गर्नुहोस्
प्रिस्क्रिप्शन जेल र क्रिम
वर्तमानमा कुनै सामयिक क्रिमहरू छैनन् जुन एफडीएद्वारा ईडीको उपचारको लागि अनुमोदित भएको छ। सामयिक औषधिहरू एन्ड्रोजेल र एक्सिरोन सामान्य टेस्टोस्टेरोनको स्तर भन्दा कमको लागि पुरुषहरूको लागि टेस्टोस्टेरोन बढाउन अनुमोदित छन्। यी औषधीहरूमा सक्रिय संघटक टेस्टोस्टेरोन हो, र पुरुषहरू जसले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्छन् उनीहरूको प्रयोगको माध्यमिक परिणामको रूपमा सुधारिएको इरेक्टाइल प्रकार्य अनुभव गर्न सक्दछन्। यद्यपि यी औषधीहरूले ED बिरामीहरूका लागि काम गर्ने छैनन् जुन ED ले कम टेस्टोस्टेरोन बाहेक अरू केहि चीजले गर्दा गरेको हो।
के ईडी उपचार अधिक काउन्टर उपलब्ध छन्?
केही ED उपचारहरू प्रिस्क्रिप्सन बिना over-the-काउन्टर (OTC) खरीद गर्न उपलब्ध हुन सक्छ। यी ओटीसी उत्पादनहरू वास्तवमा औषधी होइन तर पूरकहरू हुन्। निम्न सप्लीमेन्टहरूले भियाग्रा वा अन्य ईडी मेड्ससँग काम गर्दैन, तर केहि पुरुषहरूको लागि सहयोगी हुन सक्छ। ओटीसी उत्पादन वा ईडीको लागि पूरक प्रयोग गर्नु अघि स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनु महत्त्वपूर्ण छ।
डिहाइड्रोएपियान्ड्रोस्टेरोन (DHEA): DHEA एक स्टेरोइड प्रोमोर्मन हो देखाइएको छ बुढ्यौली प्रक्रिया को एक हिस्सा को रूप मा अस्वीकार गर्न। DHEA को कम स्तरहरूaसँग सम्बन्धित छ अधिक जोखिम ED को, त्यसैले पूरक लिँदा ED- सम्बन्धित लक्षणहरू सुधार गर्न सक्दछ।
जिन्सेng्ग: जिन्सेng्ग एक जरा हो जसले ईडीको साथ पुरुषहरूमा यौन कार्य सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यो रक्त कोशिका मा चिकनी मांसपेशीहरु आराम गरेर लि to्गा को लागी अधिक रगत प्रवाह र एक को रूप मा अभिनय गरी काम गरीन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ प्राकृतिक कामेच्छा बूस्टर ।
L-arginine: L-arginine एक एमिनो एसिड हो जसले प्रोटिनहरूको निर्माण ब्लकहरू गठन गर्दछ। यो शरीरमा नाइट्रिक अक्साइडमा परिवर्तन हुन्छ। ED को लागी L-arginine एक्लै प्रयोगको प्रमाण बलियो छैन। जे होस्, केहि अध्ययनहरूले देखाए कि L-arginine ईडी सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ जब अन्य सामग्रीहरूसँग मिलाइन्छ ..
प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन: प्रोपियोनेल-एल-कार्निटाइन शरीरमा स्वाभाविक रूपमा हुने रासायनिक पदार्थ हो। अध्ययन यसले भियाग्राको प्रभाव बढाउन सक्छ भनेर देखाइएको छ।
योहिम्बे: योहिम्बे पूरक हो जुन सहयोग गर्न सक्छ यौन समारोह सुधार गर्नुहोस् नाइट्रिक अक्साइडको प्रभाव बढाउँदै रक्तनलीहरूलाई आराम दिन र पेनाइल रगत प्रवाह सुधार गर्न। यसले कामेच्छा सुधार्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।
यो निर्धारित गर्न गाह्रो हुन सक्छ कि कहिले ओसीटी उपचार बनाउने प्रिस्क्रिप्सन औषधि बनाउने। केहि पुरुषहरू जससँग केवल हल्का र असंगत ईडी हुन्छ उनीहरूले पूरकहरू राम्रोसँग काम गर्दछन्। गम्भीर वा पुरानो ED भएका अन्य पुरुषहरूलाई प्रिस्क्रिप्शन ED गोली चाहिन सक्छ। यदि तपाईं आफ्नो लागि के सही हो भन्ने बारे अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, एक मेडिकल पेशेवरसँग कुरा गर्दा तपाईंलाई केही स्पष्टता दिन मद्दत गर्दछ।
वैकल्पिक ईडी उपचार
ईरेक्टाइल डिसफंक्शन ड्रग्स ईडीको उपचार गर्ने एक मात्र तरीका छैन। केहि पुरुषहरूले वैकल्पिक ईडी उपचार सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्षम छन्, जबकि अन्यले परिणामहरू देखिन वैकल्पिक उपचारको साथ ईडी गोलीलाई जोड्न आवश्यक पर्दछ। वैकल्पिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन उपचारको केहि उदाहरणहरू यहाँ छन्:
पूरकहरू: जिन्सेंग, जस्तो आहार पूरकहरूजिन्को बिलोबा, L-arginine, र DHEA केहि पुरुषहरूलाई तिनीहरूको ED साथ मद्दत गर्न सक्छ। यो ध्यान राख्नु महत्वपूर्ण छ कि पूरक पदार्थ एफडीए द्वारा विनियमित हुँदैन जसरी औषधिहरू छन्।
नियमित व्यायाम: पर्याप्त व्यायाम पाउँदा सम्पूर्ण शरीर र लिंगमा रगत प्रवाह सुधार गर्न सक्दछ।
धूम्रपान छोड्दै: धूम्रपानले रक्त नलीहरूलाई हानी गर्दछ र लिंगमा समग्र रगत प्रवाह कम गर्दछ। निकोटीन सिगरेटमा मुख्य रसायन हो जसले रक्त नलीहरूलाई सीमित गर्दछ र रक्त प्रवाह कम गर्दछ।
पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्दै: दीर्घकालीन हुनु निन्द्राबाट वञ्चित कम टेस्टोस्टेरोनको स्तर र न्यून संचार हुन सक्छ। एउटा अध्ययनले त्यो अनुमानित पत्ता लगायो आधा मान्छे स्लीप एपनियाको साथ कम कामेच्छा थियो। पर्याप्त निद्रा प्राप्त गर्नु सम्पूर्ण स्वास्थ्यको लागि पनि आवश्यक छ।
शल्य चिकित्सा: पेनाइल इम्प्लान्टहरू कि त inflatable वा द्वेष योग्य छन् लि men्ग भित्र सम्मिलित गर्न सकिन्छ पुरुष प्राप्त गर्न र निर्माण कायम राख्न।
इरेक्टाइल डिसफंक्शनको लागि भर्खरको उपचार अकौस्टिक प्रेशर वेभ वा शॉकवेभ थेरापी हो, ईडीमा विशेषज्ञ पुरुषहरूको स्वास्थ्य क्लिनिक चलाउने बोर्ड-प्रमाणित लाइफस्टाइल मेडिसिन चिकित्सक, एमडी, अलेक्ज्याण्डर लाइटस्टोन बोरसान्ड भन्छन्। क्यामब्याक मेडिकल क्लिनिक । यो उपचारले नाइट्रिक अक्साइड सिंथेसलाई उत्तेजित गर्न र नियोभास्कुलाइजेशनलाई बढावा दिन लि of्गको रक्त वाहिकाहरूको भित्री अस्तरलाई लक्षित गर्न ध्वनि तरंगहरूको प्रयोग गर्दछ। उत्पादन हुने नाइट्रिक अक्साइडको मात्रा बढाउँदै, रक्त नलीहरू चौडा हुनेछ र अधिक रगत प्रवाहको लागि अनुमति दिनेछ, राम्रो ईरेक्शनको लागि अग्रणी। न्युवास्कुलराइजेसनको माध्यमबाट नयाँ रक्त वाहिकाहरूको विकासलाई बढावा दिनाले लि to्गमा रगतको मात्रा बढाउन पनि अनुमति दिन्छ।
तपाइँको लागि उत्तम ED गोली कसरी फेला पार्ने
उत्तम ईडी गोली खोज्दा केहि परीक्षण र त्रुटि लिन सक्छ। सबैले औषधीलाई थोरै फरक प्रतिक्रिया गर्दछन्, त्यसोभए के काम गर्दछ जुन एक व्यक्तिको लागि अर्कोको लागि काम गर्दैन। तपाइँको डाक्टर संग कुरा गर्ने को लागी सही निर्णय गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरिका हो ईडी उपचार तिम्रो लागि सहि छ।
यहाँ केहि प्रश्नहरू छन् जुन तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई सोध्न सक्नुहुन्छ उत्तम निर्णयमा आउनका लागि:
कुन ED गोलीको कमसेकम साइड इफेक्टहरू छन्?
ईडी गोलीका सबैभन्दा गम्भीर दुष्प्रभावहरू के हुन्?
कुन ED गोली औषधी ड्रग अन्तरक्रिया को कम से कम राशि छ?
छोटो अवधिको उपयोगको लागि लामो अवधिमा कुन ईडी गोली सुरक्षित छ?
के मेरो उमेरले ईडी गोली मेरो लागि सब भन्दा राम्रो गर्छ?
मसँग अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरू छन्, कुन ईडी उपचार मेरो लागि उत्तम हो?
यदि तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई स्तम्भित रोग औषधीको लागि प्रिस्क्रिप्शन लेख्छ भने, तपाईं अनलाइन कुपनको माध्यमबाट पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ singlecare.com ।
8 सर्वश्रेष्ठ डीएनए टेस्ट किटहरु: जो तपाइँको लागी सही छ?
benadryl एक औषधि परीक्षण मा देखाउँछ
के तपाइँ ल्याक्टोज असहिष्णु पछि जीवनमा बदल्न सक्नुहुन्छ
कती चाँडै सेक्स पछि म योजनाbलिन सक्छु
इन विट्रो निषेचन प्रक्रिया लागत कति हुन्छ